Inona no fitaovana ilainao mitaingina soavaly? | Soavaly Noti
Inona no fitaovana ilainao mitaingina soavaly?
Jenny monge | | soavaly, fitaovana
Alohan'ny hampiharana fitsipi-pitondran-tena. ny mpitaingin-tsoavaly dia tsy maintsy misafidy ny fitaovana ilaina mba hahatsapany aina sy ho voaro amin'ireo loza mety hitranga mety hitranga.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fitaovana ilaina isika rehefa mitaingin-tsoavaly.
1 Akanjo mitaingina
1.2 Akanjo na vatana miaro
1.5 Pataloha na akanjo fohy
1.6 Ba kiraro na ba kiraro
1.7 Baoty mpitaingina soavaly
2 Fitaovana soavaly
2.2 Tsy mandeha
2.4 Mpiaro sy bandy
Tsy maintsy misy ny akanjo mahazo aina sy mora mihetsika ankoatry ny fiarovana iza no hitanao. Ny fividianana fitafiana mpitaingina kalitao dia fampiasam-bola ho an'ny mpitaingin-tsoavaly satria mamela anao hankafy bebe kokoa ny fotoana amin'ny soavaly amin'ny fahafantarana fa voaro ianao.
Ny akanjo fototra dia: Helmet, Vest na vatana miaro, palitao, fonon-tanana, pataloha mitaingina na volo, ba kiraro na pataloha ary baoty mpitaingina soavaly.
Ho fanampin'ny maha maintsy ary anisan'ny fitaovana fototra amin'ny fifehezana ny mpitaingin-tsoavaly, no singa fototra amin'ny fiarovana sy fiarovana ny mpitaingina azy. Matetika izy ireo dia vita amin'ny fitaovana manokana misy resina na plastika. Ireo fitaovana ivelany ireo dia mandray ny vokany ankoatry ny fisorohana ny satroka tsy hizara sy handavaka ny lohan'ny mpitaingina azy. Amin'ny atiny, fitaovana milay sy padded no ampiasaina.
Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny fiarovan-doha mitaingina soavaly dia nankatoavina hahazoana antoka fa tsara ny kalitao ary manome fiarovana antsika.
Mividy - Fiarovan-doha
Akanjo na vatana miaro
Io akanjo io, toy ny fiarovan-doha, dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny mpitaingina azy mandritra ny mitaingina. Izany dia tsy maintsy atao ho an'ny zaza tsy ampy taona mandrakariva sy ho an'ny olon-dehibe amin'ny fitsipi-pitondra-tena sasany. na izany aza ny fampiasana azy dia atolotra amin'ny fotoana rehetra satria mifoka ny kapoka izy mba hialana amin'ireo ratra mety hitranga amin'ny mpitaingina azy.
Izy io angamba no iray amin'ireo fitafiana mampiavaka ny mpitaingin-tsoavaly. Dia a akanjo voafidy ho an'ny estetika izay manome mihoatra ny fiarovana. Matetika dia loko tapaka sy mangatsiaka mahazatra izy ireo.
Tsy adidy izy ireo ary noho izany dia anjaran'ny mpitaingina ny manapa-kevitra raha hampiasa azy ireo na tsia. Na izany aza sdia famenon-javatra tsara hisorohana ny tsy fahazoana aina mety hateraky ny voa ao an-tanana, ankoatry ny fisorohana ny ratra raha misy ny fahalavoana.
Raha manapa-kevitra ny hampiasa azy ireo ianao dia tsara kokoa ny misafidy fonon-tànana tery izay mifanaraka amin'ny endrik'ireo tananao ary mahazo aina. Zava-dehibe ny tsy hampihenan'izy ireo ny fihetsiky ny mpitaingin-tsoavaly raha mitantana ny vatan'ny soavaliny izy.
Mividy - fonon-tanana
Pataloha na akanjo fohy
Ny pataloha natao ho an'ny mitaingina soavaly dia natao lamba lasitike sy mahatohitra izay misoroka ny fiakanjoana miaraka amin'ny soavaly mitohy.
Ny pataloha dia tokony hofidiana mifanaraka amin'ny vatan'ny mpitaingina azy nefa tsy mampihena ny fihetsiketsehana. Ny safidin'ny akanjo mampahazo aina izay mamela ny famotsoran-keloka dia tokony hanjaka amin'ny karazana hetsika rehetra.
Mividy - Pataloha Equestrian
Ba kiraro na ba kiraro
Toy ny pataloha, ny fitaovana rehetra amin'ny tongotra dia mifandray tsy tapaka amin'ny vatan'ny soavalintsika. Zava-dehibe noho izany ny mifidy ba kiraro lava sy miaraka amin'ny arofanina padded hisorohana ny fikororohana.
Baoty mpitaingina soavaly
Ity no akanjo farany farany tokony hananan'ny mpitaingina rehetra, ary akanjo iray hafa lehibe io. Manoro hevitra ny baoty avo sy mifanaraka tsara amin'ny tongotr'ilay mpitaingina azy. Noho izany, sorohina miaraka amin'ireo singa ao amin'ny lasely izay mety hiteraka fahasarotana amin'ny fihetsehana na koa ny fianjeran'ny soavaly aza dia ialana.
Matetika izy ireo dia vita amin'ny hoditra manome fiononana fanampiny, na izany aza misy modely vita amin'ny fitaovana hafa toy ny plastika izay natao ho an'ny ankizy kokoa.
Soso-kevitra ihany koa fa manana ny baoty ombelahin-tongony kely mba hifanaraka tsara kokoa amin'ilay frame ary araraoty ny tongotra tsy ho solafaka.
Mividy - kiraro
Nandritra ny tantara dia nivoatra ny ekipa soavaly. Nanomboka tamin'ny telovolana farany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, raha ny soavaly dia nanomboka ny fampiasana fambolena sy ny fampiasana miaramila ka lasa mpanao fanatanjahan-tena ary ampiasaina amin'ny fialamboly, dia io no mihodina ny fitaovany.
Ny akanjo dia fifangaroan'ny fomban-drazana (hoditra) sy maoderina. Ohatra, ny lasely dia anatomika kokoa ho an'ny mpitaingina sy ny soavaly. Na afaka mahita alika sy endrika vaovao ihany koa isika ho an'ny sombim-bava.
Andao hojerentsika hoe inona ireo singa fototra mandrafitra ny fitaovan'ny soavaly.
Afaka mahita karazany maro be eny an-tsena isika, tsy mitovy amin'ny fomba fanaon'ny mpitaingin-tsoavaly hotontosaina: mitsambikina, mitafy akanjo, manao soavaly, manafika ... na fampiasa amin'ny ankapobeny.
Saddle tsy maintsy mipetraka tsara ao ambadiky ny soavalintsika ary mamela fahalalahana tanteraka ny hetsika. Ireo vatan-kazo dia tokony hipetraka amin'ny halavany manontolo ao an-damosina mba handanjalanjana tsara ny seza
Una Ny lasely tsy mifanaraka tsara dia mety hiteraka fanaintainan'ny soavalintsika ary koa, tsy hamela ny mitaingina mitaingina tsara izany.
Misy nodona be dia be arakaraka ny fifehezana tokony hatao. Na dia manomboka amin'ny rafitra iray aza izy rehetra: saron-doha, browband, noseband, noseband ary ireo takolaka roa. Ny takelaka dia ny tadiny mandalo ny vozona ary izany, miaraka amin'ny takolaka, dia mitazona ny vavam-bava amin'ny toerany. Ny browband dia ilay tadiny mandalo amin'ny handrina ary manakana ny fehikibo tsy hihemotra. Ny muffler dia tsy maintsy ahitsy tsara mba hisorohana ny saron-doha tsy handalo ny sofina. Ny vavam-borona dia manakana ny soavaly tsy hisoka-bava ary hiampita ny valanoranony.
Matetika ny lohalika vita amin'ny hoditra sy maro hafa no feno ala ao amin'ny faritra mora tohina toy ilay mandeha amin'ny nape ny biby. Ankoatr'izay, ny sasany namindra ny lohan-doha ho any aoriana mba hisorohana azy tsy hanindry ny vozona.
Es iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny ekipa. Io no ampahany ampidirina ao am-bavan'ilay biby izy io ary ampiasaina hitarika azy. Mety ho steak na manaikitra. Ny fenitra mahazatra indrindra dia ny fonosana peratra voatonona miaraka amin'ny hateviny ambany na lehibe kokoa arakaraka ny soavaly.
Arakaraka ny mampivoatra ny barilan'ny steak no mahabe azy. Ny matevina dia vao mainka mahazo aina kokoa ho an'ny soavaly ary mora kokoa ny manaiky azy tsy misy olana.
Ny vavan'ny soavaly Tsy maintsy tazonina madio sy tsy misy tomika izy io.
Mividy - mpitondra
Mpiaro sy bandy
Es Mety ny miaro ny tongotry ny soavaly rehefa miofana, mandeha na malalaka any an-tsaha izy ireo. Ny fitehirizana ny vatan-kazo, ny fetlock ary ny kitrony, indrindra ny satroboninahitra, dia tena zava-dehibe. Mba hanaovana io asa fiarovana io dia mpiaro na fehikibo izay misoroka loza. Misy ny fiasana, fitsaharana, fitsangatsanganana, isaky ny fifehezana, ambanin'ny fehin-kibo, lakolosy sns.
Ny bandy dia matetika elastika, volon'ondry na fitambarana amin'ireo fitaovana roa ireo. Zava-dehibe ny tsy hanamafisana azy ireo loatra na hamelana azy ireo malalaka loatra ka mety ho very azy ilay soavaly.
Ireo fehin-kibo dia ampiasaina hialana sasatra na hiasa miaraka amin'ny fiasan'ny fihazonana ny mari-pana ankoatry ny fiarovana io faritra io.
Ireo mpiaro ny dia dia manampy amin'ny fiarovana ireo rantsambatana mitovy totohondry ao anaty kamio na tranofiara.
Ny lakolosy dia miaro ny voditongotra sy ny satro-boninahitry ny fiarovan-doha mba tsy hahatratrarana ny rantsambatana any aoriana.
Mividy - Mpiaro sy bandy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Inona no fitaovana ilainao mitaingina soavaly?
La Fusta, karazany ary tolo-kevitra ampiasaina
Gypsy vanner, ilay "soavaly gypsy"